कहिलेदेखि लागू होला स्मार्ट लकडाउन ? कोभिड–१९ निर्देशक समिति बैठकले दियो यस्तो निर्देशन « Salleri Khabar
कहिलेदेखि लागू होला स्मार्ट लकडाउन ? कोभिड–१९ निर्देशक समिति बैठकले दियो यस्तो निर्देशन
६ असार, काठमाडाैँ । यही महिनाको दोस्रो हप्ताबाट आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने गरी निषेधाज्ञा (स्मार्ट लकडाउन) कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । कोभिड–१९ निर्देशक समिति बैठकले असार ७ गतेपछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ लागू गर्न निर्देशन दिएको हो ।